Kol.Gammachuu: Oromoon dhugumatti nama akka isaa qabaachuu isaas nan gammades!!! Kichuu
HomeAfaan OromooNewsKol.Gammachuu: Oromoon dhugumatti nama akka isaa qabaachuu isaas nan gammades!!!
Kol.Gammachuu: Oromoon dhugumatti nama akka isaa qabaachuu isaas nan gammades!!
Har’a jaal Gammachuu bakka inni hidhamee jiru Qilinxoo dhaqeen ture. Hamileen isaa jajjabina natti hore. Garuu haala inni keessa jiru oggaan arguu garaatu na boora’e. Oromoon dhugumatti nama akka isaa qabaachuu isaas nan gammades. Saba ofiif jechaa huuqqachuun, qaamaa hir’achuu fi dararamuun homaa akka hin taanen baradhe. Maaloo goota kanaaf sagalee haa taanu.